Qadar oo dardar gelineysa taakulada dib u dhiska ciidamada Somaliya | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Qadar oo dardar gelineysa taakulada dib u dhiska ciidamada Somaliya
Muqdisho (Halqaran.com) – Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Khayre, ayaa magaalada Dhuusamarreeb ee xarunta maamulka GalMudug ku qaabilay wafdi ka socda wasaaradda Gaashaandhigga dowladda Qadar.
Kulanka labada dhinac ayaa looga hadlay xoojinta taageerada dowladda Qadar ay ugu talagashay dhismaha iyo qalabeynta ciidamada qalabka sida waxaana goobjoog ka ahaa kulanka wasiirka amniga gudaha, wasiirudowlaha wasaaradda Gaashaadhigga, Taliyayaasha ciidanka Xoogga, Booliska iyo Asluubta Soomaaliya.
Wafdiga oo ay wehliyaan taliyayaasha ciidamada dalka ayaa si wadajir ah qiimeyn ugu sameeyay xarumaha ciidamada ee ku yaalla magaalada Dhuusamareeb oo la filayo in dhawaan dib-u-dhis lagu sameeyo.
Qadar ayaa ka qeyb qaadaneysa dhismaha ciidamada Xoogga Dalka, gaar ahaan dhismaha xarumaha ciidamada ee ku yaalla Dhuusamareeb arrintaas oo qeyb ka ah barnaamijka taakuleynta ciidamada Soomaaliya.
Xariirka ka dhexeeya dowladda Soomaaliya Qadar ayaa ah mid aad u wanaagsan siina xoogeysanaya tan iyo sanadkii 2017-kii kolkaas oo dowladda Soomaaliya ay dhedhexaad ka noqotay khilaafka u dhexeeya dalalka khaliijka iyo Qadar.
Shirkadda duullimaadyada Qatar Airways ayaa billowgii bishan Soomaaliya ka hirgelisay duullimaad toos ah oo isku xira magaalooyinka Muqdisho iyo Dooxa.